Star Power-ka 40-maadkii: Waa Kuwee 3-Atoore Sanadii 1941 Bollywood-ka Ugu Awooda Badnaa – Filimside.net
Star Power-ka 40-maadkii: Waa Kuwee 3-Atoore Sanadii 1941 Bollywood-ka Ugu Awooda Badnaa
K L Saigal (Bidix), Ashok Kumar (Dhexda), Prithviraj Kapoor (Midig)
Madaama 10-kaan sano gabo gabo (2010 ilaa 2019) gabo gabo ku dhow yahay sidoo kalena Star Power-ka atoorayasha aan kasoo sheekeenay waxaan dib ugu laaban doonaa xogta rasmiga ah ee la heli karo kana soo bilaabato awooda fanka Hindiya.
Aqristayaasha shabakada Filimside ku xiran waxaan horey ula wadaagnay Star Power-ka awooda atoorayaasha sida ay ahayd 90-maadkii (1990 ilaa 1999), 2000-maadkii (2000-09) iyo 10-kaan sano aan guda jirno (2010 ilaa 2019) kaliya xogta 2019 ayaa naga harsan marka uu sanadkan dhamaado ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allah.
Sanadii 1941 Iyo 3-Atoore Ugu Awooda Badneyd Bollywood-ka:
1. K L Saigal: HIT-ka ugu weyn uu sameeyay 1941 wuxuu ahaa Lagan.
2. Ashok Kumar: HIT-ka ugu weyn uu sameeyay 1941 wuxuu ahaa Jhoola.
3. Prithviraj Kapoor: HIT-ka ugu weyn uu sameeyay 1941 wuxuu ahaa Sikander.
Sharaxaad Guud Bollywood-ka Wixii Ka Dhacay 1941:
K L Saigal oo sidoo kale heesaa ahaa ayaa Hindiya heestay 40-maadkii waxaana u suura gashay sanadkii labaad oo xariir ah inuu hogaanka Bollywood-ka u haayo waxaana Big HIT u noqday filimkii la wada jeclaaday Lagan.
Ashok Kumar xili dahabi ah ayuu bartanka kaga jiray mana loo dhawaan karin waayo wuxuu isku xijiyay sedex filim oo Big Blockbuster noqdeen weliba mid walbo 25-todobaad iyo ka badan ayuu tiyaatarada saarnaa waxayna kala ahaayeen Kangan(1939), Bandhan (1940) iyo Jhoola (1941).
Prithviraj Kapoor ruug cadaagan wuxuu ahaa atooraha sedexaad ee Bollywood-ka ugu awooa badan bilawhii 40-maadkii waxaana Big HIT u noqday filimka Sikander sanadii 1941.
La Soco 3-Atoore Bollywood-ka Ugu Awood Badnaayeen Star Power Ahaan 1942 Iyo Wixii Dhacay Xiligaas.
Haddii aadan Aqrisanin Maqaalkii 3-Atoore Bollywood-ka Ugu Awood Badan 1940 Fadlan RIIX HALKAAN
Waxaa Aqrisay 192